I-Allocadia: Yakha, Landelela, futhi ukale Izinhlelo Zakho Zokumaketha Ngokuzethemba Nokulawula Okukhulu | Martech Zone
I-Allocadia: Yakha, Landelela, futhi ukale Izinhlelo Zakho Zokumaketha ngokuthembela Nokulawula Okukhulu
NgoLwesibili, Novemba 28, 2017 NgoLwesibili, Novemba 28, 2017 UJeff Epstein
Ukukhula okuyinkimbinkimbi nokucindezela okwandayo ukufakazela umthelela yizizathu ezimbili nje zokuthi kungani ukumaketha kuyinselele kakhulu namuhla kunakuqala. Ukuhlanganiswa kwamashaneli atholakalayo, amakhasimende anolwazi oluningi, ukwanda kwedatha, kanye nesidingo esihlala njalo sokufakazela umnikelo kwimali engenayo nezinye izinhloso kuholele ekukhuphukeni kwengcindezi kubakhangisi ukuba babe ngabahleli abacabangayo nabaphathi abangcono bezabelomali zabo. Kepha inqobo nje uma basabambekile bezama ukulandela konke kuma-spreadsheet, abasoze bazinqoba lezi zinselelo. Ngeshwa, leso yisimo se-quo Izinhlangano ezingama-80% ngokocwaningo lwethu lwakamuva.
I-Allocadia Marketing performance Management Solution Overview
Faka I-Allocadia, Isixazululo sokuphathwa kokusebenza kokumaketha kwesoftware-njengoba-isevisi esenzelwe abakhangisi, sabathengisi, esinikeza indlela engcono yokwakha izinhlelo zokumaketha, ukuphatha izimali, kanye nokulinganisa umthelela enkampanini. I-Allocadia iqeda wonke amaspredishithi wokuhlela nokwenza isabelomali futhi yakha ukuqonda kwesikhathi sangempela mayelana nesimo sokuchitha nokuthengisa i-ROI. Ngokusiza abezimakethe ukuSebenza ngokuMaketha kahle, i-Allocadia ibuye isize abakhangisi ukuthi benze ezokukhangisa kahle kakhulu.
Ipulatifomu le-Allocadia linciphisa amandla amathathu ayisisekelo: Ukuhlela, Ukutshala Imali, kanye Nemiphumela Yokulinganisa.
Ake siqale ngomjikelezo wakho wokuhlela wonyaka. I-Allocadia isungula isakhiwo esilinganiselwe kanye ne-taxonomy yokuthi wena neqembu lakho nizokwenza kanjani ukwakha uhlelo lwakho lokumaketha. Noma ngabe ihlelwe ngejografi, iyunithi lebhizinisi, umkhiqizo, noma inhlanganisela ethile yalokhu okungenhla, isakhiwo esiguquguqukayo sika-Allocadia sizokhombisa ukuthi ufuna ukubheka kanjani ibhizinisi lakho. Mane nje wakhe isigaba sakho sabaphathi osithandayo, bese unikeza izinhloso ezihambisanayo zokuchitha phansi ezihambisanayo. Lokhu kufaka ingxenye yokuqala yohlelo lwakho, futhi kunikeza abanikazi besabelomali umkhombandlela ocacile wokuthi kufanele bahlukanise kanjani izimali zabo kusuka ezansi kuya phezulu (isigamu sesibili), ngendlela ehambelana ngokuphelele nakho konke okubekwe phambili kwezokutshalwa kwezimali kanye namasu okubaluleka.
Njengoba wonke umuntu esebenzisa uhlelo olufanayo, elandela imihlangano efanayo yokuqamba amagama, nokumaka izinto ngezindlela ezifanele, manje uzokwazi ukuhlanganisa zonke izinhlelo ezahlukahlukene ezansi zibe umbono owodwa ophelele, wenhlangano. Uzokwazi ukubona ukuthi zonke izinhlelo zakho zihlelelwe ukwehla nini futhi kuphi, zizobiza malini, nokuthi umthelela olindelekile emalini ezoba yini.
Ukutshala imali ne-Allocadia
Uma isikhathi esinikeziwe sesiqhubeka, abathengisi kufanele bazi ukuthi bami kuphi ngezindleko kanye nesabelomali esitholakalayo ukuze bazi ukuthi bangakanani igumbi okufanele balivumelanise nokulungisa. Kepha uma bethembela kuthimba le-accounting ukubathola lolu lwazi, bangaba sengcupheni yokulinda isikhathi eside kakhulu noma ngeke bathole idatha abayidingayo ngefomethi elungile. Kungenxa yokuthi ezezimali zibheka umhlaba kuma-akhawunti we-GL, hhayi izinhlelo noma imisebenzi efana neyenziwa ngabakhangisi.
I-Allocadia ixazulula le nkinga ngokungenisa futhi imephu ngokuzenzakalela idatha yama-invoyisi esuka kwezezimali iye ezintweni ezifanele zomugqa wesabelomali e-Allocadia ukuze abathengisi bakwazi ukubona ngokushesha lokho abakusebenzisile, lokho abahlela ukukusebenzisa, nokuthi yini abashiye ukuchitha. Manje sebengawulungela amathuba njengoba evela, ngaphandle kokukhathazeka ngokuya ngaphezulu noma ngaphansi kwesabelomali. Ngoba uma isikhathi siphela, ukuqhubekela phambili kusabelomali esingasetshenzisiwe ngokuvamile kusuke kungasuki etafuleni.
Ukulinganisa Imiphumela nge-Allocadia
Isinyathelo sokugcina esisendleleni eya e-ROI imvamisa sinzima kakhulu. Ukukwazi ukubopha amapayipi kanye nemali engenayo emisebenzini yezokumaketha nemikhankaso kuyinto engenzeki - ngaphambi kwe-Allocadia. Ngokuxhumanisa idatha ye-CRM ngqo nezinto zomugqa e-Allocadia, senza kube lula ukuxhuma amachashazi phakathi kokutshala kwakho imali kanye nomthelela abawushayelayo. Manje usungaba ngumnikazi wengxoxo kwi-Marketing ROI, futhi ukhombise yonke inkampani ukuthi okwenzayo kukushayela umthelela wangempela, olinganisekayo ebhizinisini. Ngokwenza imodeli enamandla yokunikezwa nemininingwane ku-ROI ngenhloso, uzokwaziswa kangcono ukunquma ukuthi uzolisebenzisa kuphi idola lakho elilandelayo lokukhangisa.
Qalisa Ukumaketha Kakhulu Ukuze Ungenze Ukumaketha Kungcono
Kusukela kumathuluzi wokumodela engenayo ukuya ekuhlelweni kwesimo kanye nokumakwa okulungisekayo, i-Allocadia ifaka amakhono anhlobonhlobo wokukusiza uqalise ukumaketha ngokuqina, ukuvumelana, nokubikezela. Izokongela isikhathi nomzamo ekuhleleni nasekubhajetheni ukuze ukwazi ukugxila emandleni amaningi ekwakheni nasekwenzeni imikhankaso emihle yokukhangisa ehambisa imiphumela emihle.
I-Allocadia ngezinombolo *:
Isikhathi esimaphakathi esigciniwe ekuhleleni nakwisabelomali: 40-70%
Inani lotshalo-mali olwenziwe kabi olwenziwe kabusha: 5-15%
Ukuthuthuka okuphelele ku-Marketing ROI: 50-150%
Isikhathi sokukhokha ekutshalweni kwe-Allocadia: Ngaphansi kwezinyanga eziyi-9
* Njengoba kubikiwe ngamakhasimende akwa-Allocadia
Imikhuba Emihle Yokulawulwa Kokumaketha
Ukwenza ngcono ukusebenza kwakho kokumaketha kunguhambo ngezigaba ezinhlanu zokuvuthwa. Sifingqe lezi zigaba futhi sachaza ngokucophelela ukuthi singathuthuka kanjani esigabeni ngasinye kwesethu Imodeli Yokukhula Kokusebenza Kwezentengiso. Kuyo uzofunda ukukhomba ukuthi ukuphi namuhla, nokuthi yini okudingeka uyenze ukuze uthuthukele ezingeni elilandelayo.
Nakhu ukuthi ukubukeka kubukeka kanjani kusuka phezulu:
Sungula i- Isikhungo Sokumaketha Sokwenza Okuhle okuheha, okuqeqesha, futhi kugcine ithalente elihle kakhulu ebhizinisini, kufaka phakathi abantu abanedatha eqinile namandla okuhlaziya.
Qondanisa imizamo yakho nalabo abaphakathi Ukuthengisa nezezimali, kuze kube sezingeni lapho ezezimali kungumeluleki othenjiwe futhi nabathengisi baqonda ukuthi ukumaketha kunikela kanjani futhi kulayini ophezulu.
Beka kucace, kufinyeleleke, Izinhloso ze-SMART kuwo wonke amazinga wenhlangano Yezokumaketha, kanye namamethrikhi afakwa esikhundleni 'wezinto ezingelutho' njengezivakashi zewebhusayithi kanye ne-imeyili kuvulwa ngamamethrikhi anzima njenge-cost-per-lead, umnikelo wepayipi, ne-ROI.
Susa ama-data silos, yenza kube ngokulinganayo ku-taxonomy engaguquki nohlaka, futhi kusungulwe umthombo owodwa weqiniso wokusebenzisa imali nokumaketha. Bophela idatha yakho ukuze wenze isenzo esibekiwe.
Invest in a isitaki sobuchwepheshe bokuthengisa esebenzisa amathuluzi akamuva wengeze inani, enemephu ecacile yalapho uhlose ukuya khona nesitaki sakho njengoba ibhizinisi linwebeka. Okumaphakathi kuzoba yi-CRM yakho, ukumaketha okuzenzakalelayo, kanye nezixazululo ze-MPM.
Ufuna ukwazi ukuthi uhlangana kanjani neModeli Yokukhula Kokusebenza Kokumaketha? Thatha inhlolovo yethu yokuhlola bese uqhathanisa imiphumela yakho nakwabanye abathengisi abangaphezu kwama-300 emhlabeni jikelele!
Thatha Ucwaningo Lokuhlola Lokumaketha
I-Allocadia isebenzela izinkampani ze-B2B kuyo yonke imikhakha ehlukahlukene kubandakanya i-Technology, Finance & Banking, Manufacturing, Business Services, ne-Travel & Hospitality. Ikhasimende lephrofayili elifanele linethimba labakhangisi abangama-25 noma ngaphezulu kanye / noma isu lokumaketha eliyinkimbinkimbi, leziteshi eziningi ngokuvamile elihlanganisa ama-geographies amaningi, imikhiqizo, noma amayunithi webhizinisi.
Isifundo Icala Lokuphathwa Kokumaketha - Allocadia
Ibhizinisi lezinsizakalo zezezimali lihamba ngokushesha futhi linokuncintisana okukhulu, ikakhulukazi uma ukhonza imakethe enkulu. KwaCharles Schwab, lokhu kuguqulela kwisabelomali esikhulu sokukhangisa esinamanzi ngokufakwa kabusha kaningi kanye nezikhungo ezingaphezu kwezingu-95 zezindleko. Ukwenza izinto zibe yinselelo enkulu, iqembu eliseCharles Schwab lizibambele ezingeni eliphakeme kakhulu lokusebenzisa imali, ngenhloso yokubhekisa ku-2% kuya ku-0.5% wesabelomali.
U-Allocadia usize leli qembu elikhulu labakhangisi ukuthi lisuse amaspredishithi futhi lihlanganise nemali eliyisebenzisayo yokumaketha ngohlelo olulodwa, oluhlangene, oluhleliwe olugcina isidingo sabo sokuguquguquka futhi silalele ushintsho. Ngenqubo elula, esheshayo yesabelomali nokubonakala okungcono ekutshalweni kwemali, abathengisi baseCharles Schwab bangabaphathi abangcono besabelomali sokumaketha futhi bangababalisi bezindaba abangcono ngomthelela wabo ebhizinisini.
Landa i-Case Study
Izinyathelo Ezinhlanu Zokukhulisa Ukusebenza Kwakho Kokumaketha
Tags: ukwabiwaimikhuba engcono kakhuluideshibhodi yezentengisoubuhle bokumakethaizinhloso zokuthengisaukusebenza kwezokukhangisaukuphathwa kokusebenza kokukhangisaiphayiphi lokumakethaukuhlela ukumakethaizinhlelo zokumakethaisitaki sobuchwepheshe bokuthengisaisitaki se-martechukumaketha okulinganisiwempmsmart
Ukusiza izinhlangano zokumaketha ezisezingeni eliphakeme emhlabeni ukwandisa imali futhi zilethe inani elikhulu kumakhasimende abo nge I-Allocadia Ipulatifomu ye-Marketing Performance Management, isisombululo sokuhlela, isabelomali, nokuphathwa kokusebenza okunamandla kakhulu emhlabeni.
Abakhi bohlelo lokusebenza lweselula namaPulatifomu wewebhu weselula webhizinisi lakho
Izihluthulelo Ezi-6 Zokuphumelela Kwenkonzo Yamakhasimende Kusetshenziswa Imidiya Yezokuxhumana